Askarigii Ugu Horreeyay Oo Turkiga looga Dilay Howlgalka Laanta Zeyntuunka Ee Waqooyiga Suuriya.
Tuesday January 23, 2018 - 07:41:46 in Wararka by Super Admin
Dagaallo culus ayaa maalintii Afaraad oo xiriir ah ka socda gobolka Xalab ee dhaca waqooyiga wadanka Suuriya.
Ciidamada Dowladda Turkiga iyo maleeshiyaadka Mucaaradka Suuriya ayaa guulo hordhac ah ka gaaray guluf dagaaleedka ay ku qaadeen Maleeshiyada Kurdiyiinta ee ka dagaallamaya mandiqadda Cafriin ee istiraatiijiga ah.
War rasmi ah oo kasoo baxay Melleteriga Turkiga ayaa lagu sheegay in askarigii ugu horreeyay looga dilay dagaalka islamarkaana ay qabsadeen tobaneeyo tuulo iyo degmooyin kaabiga ku haya magaalada Cafriin.
Wariye katirsan Telefeshinka Afka Carabiga ku hadla ee Aljazeera oo jiidda dagaalka ku sugan ayaa soo sheegay in ciidamada Lugta Turkiga oo wata gaadiidka gaashaaman ay ka gudbeen degmada Aczaaz ee xuduud beenaadka dhacda ayna ujiheysteen dhanka Cafriin.
Maleeshiyaadka Malaaxidada Kurdiyiinta ayaa iska caabin adag kala hortagay ciidamada Huwanta ah ee Turkigu hoggaaminayo kuwaas oo doonaya in deegaanada Xuduudda Kulaala ay ka saaraan dagaalyahanada Mareykanku Tababaray ee PKK loo yaqaan.
Degmada Balbal iyo 12 tuulo oo ku dhow Cafriin ayaa ugu muhiimsan deegaannada laga qabsaday Maleeshiyada Kurdiyiinta, wakaaladda wararka ufaafisa Turkiga ayaa sheegtay in askarigii ugu horreeyay oo Turkish ah lagu dilay howlgalka loogu magac daray Laanta Zeytuunka.
Rajeb Dayib Erdogaan Madaxweynaha Turkiga oo hadlay ayaa sheegay in dowladdiisu ay sii wadi doonto howlgalka ka dhanka ah Kurdiyiinta isagoo meesha ka saaray in ay udhega nuglaanayaan walaaca kasoo yeeraya Mareykanka ee ku aaddan wiiqidda maleeshiyaadka Kurdiga.
Dagaalka dib uga qarxay gobolka Xalab waxaa ka qeyb qaadanaya kumaan maleeshiyaad Suuriyaan ah gaar ahaan kuwa loo yaqaan Jeyshul Xurrah oo ah maleeshiyaad sanadadii lasoo dhaafay dowladda Turkiga ay taageero melleteri iyo mid dhaqaale siinaysay.
Falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in haddii howlgalka Turkiga ee Waqooyiga Suuriya uu sii ballaarto ay suurtagal tahay in ay isku dhacaan dowladaha duullaanka gardarrada ah ku qaaday wadankaas kuwaas oo kala wata dhinacyada hubeysan.
Turkiga oo maamulka Siisi u gacan gelisay Nin ku Xukunnaa dil toogasho ah.